သမီးလေးနေမကောင်းလို့ အသက်ရှုဖို့တောင်မေ့တယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ - Cele Platform
သမီးလေးနေမကောင်းလို့ အသက်ရှုဖို့တောင်မေ့တယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
September 13, 2019 Kyaw Kyaw Celebrities 0
နိုင်ငံကျော် မင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေက သရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ ထူးချွန်ပြီး မြန်မာဆန်တဲ့ မျက်နှာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ တစ်ဦးပါ။ ခိုင်နှင်းဝေက အသက်အရွယ် တစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ အနုပညာလုပ်ငန်းအပြင် သူမဝါသနာပါပြီး စိတ်အားထက်သန်တဲ့ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း လုပ်ဆောင်နေလျက် ရှိပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေက “ခိုင်နှင်းဝေပရဟိတ လူငယ်များအသင်း” နဲ့ “ခိုင်နှင်းဝေ ရင်သွေးလေးများဂေဟာ” ကို ဦးစီးတည်ထောင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခိုင်နှင်းဝေက များပြားလှတဲ့ အလုပ်တာဝန်တွေကြားမှာမှ သူမရဲ့ သမီးလေး ရွှန်းရတီခိုင်ကို အချိန်ပေး ဂရုစိုက်နေတဲ့ မိခင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ သူမခရီးသွားခါနီး နေမကောင်းဖြစ်တဲ့ သမီးကြောင့် အသက်တောင်ရှုဖို့ မေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ခိုင်နှင်းဝေက အခုလိုပဲ ပြောပြထားပါတယ်။
“မနက်ဖြန်ခရီးသွားရပါမယ်ဆိုမှ သမီးက ဖျားနေတော့ သွားဖို့ စိတ်ကမဖြောင့်တော့ဘူးး နေမကောင်းတော့ အမေကို အရမ်းကပ် မျက်စိအောက်ကအပျောက်မခံ၊ အစာစားဖို့ကိုဂျီကျ၊ မနက်ကဆေးခန်းပြပြီး ဆေးတိုက်၊ အစာလေးဝင်အောင် ချော့ကျွေး၊ ပြန်အန်နဲ့ “
“သူ့ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်မှာ အသက်ရှုဖို့တောင်မေ့မေ့သွားတယ်။ အိပ်ဖို့အရေး မအေကိုအိုက်တင်တွေမျိုးစုံလုပ်ပြနေတာ။ နေမကောင်းတော့ မျက်လုံးလေး မတောက်ဘူး. ❤️ အိပ်မယ်ဆို “အိပ်ဘူး”တဲ့..”တာ့တာ” ဆို “ဘိုင့်ဘိုင့်”တဲ့.. 😘” ဆိုပြီး သမီးလေး ရွှန်းရတီခိုင်အကြောင်းကို ပြောပြလာပါတယ်။
မအိပ်ခင် မေမေခိုင်နှင်းဝေကို အမျိုးမျိုးလုပ်ပြနေတာ ချစ်စရာလေးနော် ခိုင်နှင်းဝေကတော့ သမီးလေး ရွှန်းရတီခိုင်ကို စိတ်မချလို့ အသက်တောင် မရှုနိုင်တဲ့ မိခင်မေတ္တာကို ပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို မိုမိုလေးမှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ Momolay
နိုငျငံကြျော မငျးသမီးတဈဦးဖွဈတဲ့ ခိုငျနှငျးဝကေ သရုပျဆောငျတဲ့နရောမှာ ထူးခြှနျပွီး မွနျမာဆနျတဲ့ မကျြနှာကို ပိုငျဆိုငျထားသူ တဈဦးပါ။ ခိုငျနှငျးဝကေ အသကျအရှယျ တဈခုရောကျတဲ့အခါမှာတော့ အနုပညာလုပျငနျးအပွငျ သူမဝါသနာပါပွီး စိတျအားထကျသနျတဲ့ ပရဟိတလုပျငနျးတှကေိုလညျး လုပျဆောငျနလေကျြ ရှိပါတယျ။ ခိုငျနှငျးဝကေ “ခိုငျနှငျးဝပေရဟိတ လူငယျမြားအသငျး” နဲ့ “ခိုငျနှငျးဝေ ရငျသှေးလေးမြားဂဟော” ကို ဦးစီးတညျထောငျထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ခိုငျနှငျးဝကေ မြားပွားလှတဲ့ အလုပျတာဝနျတှကွေားမှာမှ သူမရဲ့ သမီးလေး ရှနျးရတီခိုငျကို အခြိနျပေး ဂရုစိုကျနတေဲ့ မိခငျတဈဦး ဖွဈပါတယျ။ ဒီနတေ့ော့ သူမခရီးသှားခါနီး နမေကောငျးဖွဈတဲ့ သမီးကွောငျ့ အသကျတောငျရှုဖို့ မခေဲ့တဲ့အကွောငျးကို ခိုငျနှငျးဝကေ အခုလိုပဲ ပွောပွထားပါတယျ။
“မနကျဖွနျခရီးသှားရပါမယျဆိုမှ သမီးက ဖြားနတေော့ သှားဖို့ စိတျကမဖွောငျ့တော့ဘူးး နမေကောငျးတော့ အမကေို အရမျးကပျ မကျြစိအောကျကအပြောကျမခံ၊ အစာစားဖို့ကိုဂြီကြ၊ မနကျကဆေးခနျးပွပွီး ဆေးတိုကျ၊ အစာလေးဝငျအောငျ ခြော့ကြှေး၊ ပွနျအနျနဲ့ “
“သူ့ကိုကွညျ့ပွီး ကိုယျ့မှာ အသကျရှုဖို့တောငျမမေ့သှေ့ားတယျ။ အိပျဖို့အရေး မအကေိုအိုကျတငျတှမြေိုးစုံလုပျပွနတော။ နမေကောငျးတော့ မကျြလုံးလေး မတောကျဘူး. ❤️ အိပျမယျဆို “အိပျဘူး”တဲ့..”တာ့တာ” ဆို “ဘိုငျ့ဘိုငျ့”တဲ့.. 😘” ဆိုပွီး သမီးလေး ရှနျးရတီခိုငျအကွောငျးကို ပွောပွလာပါတယျ။
မအိပျခငျ မမေခေိုငျနှငျးဝကေို အမြိုးမြိုးလုပျပွနတော ခဈြစရာလေးနျော ခိုငျနှငျးဝကေတော့ သမီးလေး ရှနျးရတီခိုငျကို စိတျမခလြို့ အသကျတောငျ မရှုနိုငျတဲ့ မိခငျမတ်ေတာကို ပွောပွလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အခြိနျပေးပွီး ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးကို မိုမိုလေးမှ ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျ။ Momolay
ပရိတ်သတ်တွေ ပါးစပ်မပိတ်ရအောင် ပွဲကျစေအုံးမယ့် မင်းသားမင်းသမီးအစုံနဲ့ ဘာလာလာ ရုပ်ရှင်ကားကြီး